ဘဝက အဓိပ္ပာယ် မရှိသလို ခံစားလာရပြီဆိုရင် ကိုယ်ဘာဖြစ်ချင်လဲ စဉ်းစားကြည့်ဖို့ လိုပါပြီ
By Aurora 21 October 2018
လူတချို့ကတော့ ငယ်ရွယ်စဉ်အချိန်တည်းက သူတို့မှာ ရည်မှန်းချက် ကိုယ်စီ ရှိပြီးသားပါ။ ကြီးလာရင် ဘာလုပ်ချင်လဲ မေးလိုက်တာနဲ့ “ဆရာဝန်ကြီး ဖြစ်ချင်တယ်”၊ “အင်ဂျင်နီယာကြီး ဖြစ်ချင်တယ်” တန်းဖြေကြပြီး တကယ် ဖြစ်မြောက်အောင် လုပ်နိုင်သူတွေရှိသလို မလုပ်နိုင်သူတွေလည်း ရှိပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ လူတော်တော်များများအတွက်တော့ “ဘဝရည်မှန်းချက်” ဆိုတာ လွယ်လွယ် အဖြေရှာ မရသလို အဖြေရှာဖို့ ဝေဝါးနေဆဲ အခြေအနေတခုက အသက်အရွယ်တခုမှာ ရှိနေတတ်ပါတယ်။
ဘဝက အဓိပ္ပာယ် မရှိသလို ခံစားလာရပြီဆိုရင် ကိုယ်ဘာဖြစ်ချင်လဲ စဉ်းစားကြည့်ဖို့ လိုလာပါပြီ။ ပန်းတိုင်ဆိုတာ မရှိဘဲ ဦးတည်ရာဆိုတာ မရေရာဘဲ ဘဝကိုဖြတ်သန်းလို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် သင့်ဘဝရဲ့ ဦးတည်ရာကို သိနားလည်လာဖို့ အဖြေထုတ်နိုင်မယ့် မေးခွန်းတွေ ပြင်ဆင်ထားပါ။ စိတ်ထဲကရှိတဲ့အတိုင်း ဖြေကြည့်ရင်း သင့်ဘဝရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တွေကို တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။
ငယ်ငယ်တုန်းက ဘယ်အရာတွေ လုပ်ရရင် စိတ်လှုပ်ရှား ပျော်ရွှင်ရလေ့ရှိလဲ? တော်တော်များများကို ဒီမေးခွန်း မေးလိုက်ရင် “ဂိမ်းဆော့ရတာ ကြိုက်တယ်”၊ “အရုပ်ကားလေးတွေကို သဘောကျခဲ့တယ်”၊ မိန်းကလေးတွေဆို “အရုပ်မကို ဝတ်စုံဝတ်ပေးရတာ သဘောကျတယ်” စတဲ့အဖြေတွေ ကြားရမှာပါ။
တနေ့ကို အချိန်အကြာကြီး ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့ ကစားနည်းတွေ ကစားခဲ့ပေမယ့် အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါ ဒါတွေနဲ့ဆက်စပ်မှုရှိရဲ့လား။ တက်ခဲ့တဲ့ တက္ကသိုလ် မေဂျာကရော ကိုယ့်အကြိုက်ဆုံး ရွေးချယ်ခဲ့တာလားဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြန်လည် သုံးသပ်သင့်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ငယ်စဉ်က စိတ်ဝင်စားတဲ့ အကြောင်းအရာတွေဆိုတာ ဘဝအတွက် အောင်မြင်ရေးသော့ချက် အခြေခံတွေပါ။
ပညာရှင်တွေက ငယ်စဉ်တုန်းက အရူးအမူး သဘောကျခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ပြန်မှတ်မိအောင် စဉ်းစားပါလို့ အကြံပေးပါတယ်။ ဒါဟာ သင့်အတွင်း စိတ်ထဲမှာ သဘောကျနှစ်သက်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို Memory ပြန်ခါ်ခိုင်းတာပါပဲ။ “ကိုယ်ဘာ ဝါသနာပါခဲ့တယ်”၊ “ဘာလုပ်နေရရင် ပျော်နေခဲ့တယ်”ဆိုတာ မှတ်မိပြီဆိုရင် ရှေ့ဆက်ရမယ့် ပန်းတိုင်ကို မြင်လာပါလိမ့်မယ်။
အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်နေတဲ့အခါမျိုးမှာ အချိန်တွေကို ဘယ်လိုဖြတ်သန်းလဲ။ လုပ်ကြည့်ချင်ပေမယ့် အရင်က အလုပ်များနေလို့ မလုပ်ကြည့်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အရာတွေကို လုပ်မလား။ တခြား ကိုယ်တခါမှ မလုပ်ဖူးတဲ့အသစ်အဆန်းတွေကို စမ်းလုပ်ကြည့်မလား။
ဒီလို အချိန်ဖြုန်းကြည့်ရင်းနဲ့ အရင်က စိတ်မဝင်စားဘူးလို့ ထင်တဲ့အရာတွေက စိတ်ဝင်စားစရာ ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ငယ်ငယ်ကစိတ်ဝင်စားခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာတွေ ပြန်မှတ်မိလာမယ်၊ ကိုယ်တကယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ အကြောင်းအရာကို ရှာတွေ့လာတတ်ပါတယ်။
တခုခုလုပ်နေရရင် ကမ္ဘာကြီးကိုတောင် မေ့နေတတ်တဲ့ သင်အနှစ်သက်ဆုံး အကြောင်းအရာက ဘာဖြစ်မလဲ။ “ထမင်းမေ့ ဟင်းမေ့” ဖြစ်တဲ့ထိ လုပ်နေရရင် ပျော်နေတဲ့ အလုပ်ပဲပေါ့။ တကယ်တော့ ဝါသနာအပါဆုံ းအလုပ်တွေဆိုတာ လူတိုင်းကိုယ်စီမှာ ရှိပါတယ်။ သေချာနားလည်သဘောမပေါက်တာနဲ့ သတိမထားမိတာပါ။
ဘယ်လို အကြောင်းအရာ စာအုပ်မျိုးတွေဆို နှလုံးသားထဲအထိ ရောက်အောင် ဖတ်လေ့ရှိလဲ? တချို့အတွက် ပျင်းစရာကောင်းတဲ့ အကြောင်းအရာတွေက ကိုယ့်အတွက်တော့ စိတ်ဝင်စားစရာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်နေတတ်သလိုမျိုးပေါ့။ ကိုယ်အနှစ်သက်ဆုံး ဖတ်လေ့ရှိတဲ့ စာအုပ်တွေထဲကလည်း သင့်ဘဝရည်မှန်းချက်ကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မယ့် ဦးတည်ရာတွေဆီ ခေါ်ဆောင်သွားနိုင်ပါတယ်။
မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်း အများကြီးထဲကမှ ဘယ်သူက သင်နဲ့ ရင်ဘတ်ချင်းအနီးဆုံး တီးတိုးဖော်ဖြစ်မလဲ။ သူနဲ့ရော ဘယ်လို အကြောင်းအရာတွေဆို တိုင်ပင်ဖြစ်လဲ။ ဘာတွေအတူတူ လုပ်လေ့ရှိလဲ။ တခါတလေ ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ်မမြင်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေကို သင်နဲ့ အရင်းနှီးဆုံး သူငယ်ချင်းကတဆင့် သိမြင်လာတတ်ပါတယ်။
သင့်ဘဝမှာ မသေခင် လုပ်ကြည့်ချင်တဲ့အရာ၊ သွားချင်တဲ့နေရာ၊ စားချင်တဲ့ အစားအစာတွေကို စဉ်းစားထားတာ ရှိမှာပါ။ ငါတနေ့ ပိုက်ဆံတွေရှာနိုင်တဲ့အခါ ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ကြည့်ချင်တာမျိုး၊ဘယ်နေရာတွေ သွားလည်ချင်တာမျိုးတွေက သင့်အတွင်းစိတ်ရဲ့ ခံစားချက် အစစ်အမှန်တွေမို့ ယုံကြည်နေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ကိုယ်အလုပ်ချင်ဆုံး အကြောင်းအရာတခုက မဖြစ်နိုင်ဘူး ပြောကြရရင်တောင် လက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖော်ဖို့က သင့်တာဝန်ပါ။
သင့်ဘဝမှာ အဖြစ်ချင်ဆုံး အိပ်မက်တွေရှိလား။ ဒါမှမဟုတ် ခုချိန်ထိ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်နဲ့ ဝေဝါးနေဆဲလား။ အတိအကျ ပေါ်မထွက်သေးဘူး ဆိုရင်တောင် စိတ်ဓာတ် မကျပါနဲ့။ ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်တခုနဲ့တင် ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက် ပြီးမြောက် အောင်မြင်နေပါပြီ။ တကယ်လို့ ခုချိန်မှာ သင့်အဖြစ်ချင်ဆုံးအရာ၊ အလုပ်ချင်ဆုံး အရာကို ရှာတွေ့ရှိနေပြီဆိုရင် တုန့်ဆိုင်းမနေဘဲ အမြန်ဆုံးအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
Topics: ပန်းတိုင်, ဘဝ, ရည်မှန်းချက်